Basikety Toamasina: nanetriketrika ny fandraisana ny Asut U18 | NewsMada
Basikety Toamasina: nanetriketrika ny fandraisana ny Asut U18
Noraisin’ny tompon’andraiki-panjakana isan-tokony, notarihin’ny “prefet”-n’ i Toamasina, ny filohan’ny delegasiona manokan’ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina ary ny talem-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny ekipan’ny Asut Atsinanana, avy niatrika ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, taranja basikety, U18 lahy sy vavy, natao tany Toliara.
Tsara mantsy ny vokatra teo amin’ny roa tonta, satria samy nandrombaka ny amboara avokoa. Raha tsiahivina, tompondaka ny vehivavy ary tompondaka lefitra kosa ny lehilahy. Teo amin’ny tovovavy, nandresy ny Fandrefiala Analamanga, tamin’ny isa 72 no ho 69, i Toamasina, teo amin’ny famaranana.
Ho an’ny lehilahy indray, niondrika teo anoloan’ ny Mb2All, tamin’ ny isa 74 no ho 60 ny Asut. Na izany aza, tsy nahakivy ireo tompon’andrakitra, izany vokatra izany, fa vao mainka aza nankaherezina sy noraisina tamin’ny fomba makotrokotroka sy manetriketrika ireo mpilalao hiatrehana ny manaraka indray.
Mahakasika ny ekipan’ny Asut izay ihany, naseho tamin’ io lanonana io ihany koa ny mpilalao mpanorina ny klioba sy ny kapiteny voalohany tamin ‘izany, dia i Belalahy Hervel, izay nanambara fa ezahina hatrany ny hisian’ny ankizikely, hanao basikety eny anivon’ny sekoly mba ho taninketsa, ka hitadiavana mpamatsy vola tsy miankina, satria tombony ho an’ny firenena.